USB Pen Drive တွေမှာဖြစ်တဲ့ Write Protect ကိုပယ်ဖျက်နည်း ~ .
USB Pen Drive တွေမှာဖြစ်တဲ့ Write Protect ကိုပယ်ဖျက်နည်း
ကျနော်တို့ USB တို့ Memory Card တို့ သုံးတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်လေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ် USB Drive က Wirte Protect ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးအောက်ကစာသားမျိုးတွေလာပြပါတယ်.။
အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျရင် အဲဒီ Write Protect ကိုပယ်ဖျက်တဲ့နည်းလေးကိုကျနော်ပြောပြချင်ပါတယ်.။ Registry ပိုင်းမှာပြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Registry Key ကို Backup လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ .။ တစ်ခုခုဖြစ်တာ နဲ့ နဂိုအတိုင်းပြန်လုပ်နိုင်အောင်လို့ ပါ.။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အခုစပြောပြပါ့မယ်.။
1. ပထမဆုံး Start >> Run နဲ့ Run Box ကိုခေါ်လိုက်ပါ.။ (Window Key + R) နဲ့ ခေါ်လဲရပါတယ်။
ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ regedit ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.။ Enter ခေါက်ပါ.။
2. ရိုက်ပြီးရင် အောက်ကလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားပေးပါ.။
( HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Control\_StorageDevicePolicies )
WriteProtect ဆိုတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်.။ အကယ်လို့ အဲဒီလိုမတွေ့ ခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်.။ ဘယ်လိုဖန်တီးပေးရမလဲဆိုတော့.။ အဲဒီ Registry Key (Default) ဆိုပြီးရှိတဲ့ အဖြူကွက် လွတ်တဲ့နေရာမှာ Right Click >> New >> DWORD (32-bit) Value ဆိုတာပါကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.။ ပြီးရင် Key Name ကို WriteProtect လို့ ပေးလိုက်ပါ.။
မှတ်ချက်။ ။(ရှိပြီးသားလူများ အသစ်ဖန်တီးပေးရန်မလိုပါ။)
ပေးပြီးရင် ကျနော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ WriteProtect ဆိုတဲ့ Key ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ.။ ပြီးရင် Value Data ဆိုတဲ့အောက်က Text Box မှာ0ထားပေးပါ။ ပြီးရင်ဘေးက Hexadecimal ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ.။ ပြီးရင်တော့ ​Ok နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ.။ စက်ပြန်တက်လာရင် USB Pendrive ထဲကို Data (File / Folder) တွေထည့်ကြည့်ပါ.။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ.။
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 11:21 AM